Gudoomiyaha G/Sh/dhexe oo ka hadlay waxqabadka maamulkiisa (Dhageyso+Sawirro) – Radio Muqdisho
Barnaamijka maalinlaha ah ee Sahanka oo ka baxa Radio Muqdisho ayaa waxaa marti ku ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka Sh/Dhexe Cali Guudlaawe, wuxuuna ka hadlay xaaladaha guud ee ka jira gobolka, waxqabadka maamulkiisa iyo himilooyinka uu higsanayo.
Gudoomiye Guudlaawe ayaa sheegay in maamulkiisu wax la taaban karo ka hirgeliyay gobolka, kuwaas oo sida uu sheegay isugu jira, nabadgelyada, soo celinta adeegyadii bulshada, hirgelinta mashaariic horumarineed, iyo dib u heshiisiin.
Wuxuu tilmaamay in maamulkiisu wado qorshayaal looga hortagayo fatahaadda wabiga oo dhibaato ba’an ku haya dadka ku nool nawaaxiga webiga, kaasoo sababa barakac iyo dalagii beeraha uu baabi’iyo.
Dhinaca kale gudoomiye Guudlaawe ayaa hoosta ka xariiqay in maamulkiisu uu xiriir wanaagsan iyo wada shaqeynba la leeyahay qeybaha bulshada ee ku nool gobolkaasi.
Gudoomiye Guudlaawe ayaa sheegay in gobolka Sh/dhexe uu leeyahay kheyraadka badda iyo berriga ah, sidaasi darteed uu maamulkiisu mudnaanta koobaad siinayo sidii looga faa’iideysan lahaa beeraha, xoolaha kalluunka iyo macaadinta ku jirta badda iyo berriga.
Sawir Qaade:-Farxaan Sulaymaan Daahir
Maamulka gobolka Sh/Hoose oo ku amray hey’adaha samafalka iney is diiwaangeliyaan